कथा : बैगुनीको पर्खाइ
अब भिजिट भिसाका धन्दावाललाई मार्शल कारबाही गरिने श्रममन्त्रीको उद्घोष, मन्त्रालयले २४ सै घण्टा उजुरी सुन्ने ||
बढी भाडा तिर्ने यात्रुलाई कागजातसहित निवेदन दिन आग्रह ||
भिजिट भिसाको धन्दा रोक्न मन्त्रीले गुहारे राजदूत ||
मार्चसम्म अकामाको नि:शुल्क नवीकरण ||
संस्थागतरूपमा जाने बढे पनि समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे, कुन देशमा कति ? ||
प्याराडाइज इन्टरनेशनल पुनः शीर्ष स्थानमा ||
2078-Poush-24 || मध्यान्ह
– गोविन्दबहादुर कुँवर
म हाम्रा बा आमाका पाँच सन्तान मध्ये म दोस्री हुँ । मेरा एक दाइ, दुई बहिनी र एक भाइ छन् । उनीहरुको सुख दुःखको आ–आफ्नै रमाइलो संसार छ । मेरो पनि आफ्नै संसार छ, तर मेरो संसार अरुको जस्तो रंगीन छैन । अझ मेरो संंसारमा त सेतो र कालो बाहेक अरु रंग नै छैन । सेतो भन्दा नि कालो रंग बढ्ता छ भन्दा पनि हुन्छ ।
हजुर आमाहरुको पालामा ८/१० वर्षमै बिहे हुन्थ्यो रे । आमाहरुका पालामा १२/१५ हुन्थ्यो रे । छोरी पर नसर्दै कन्यादान गरेमा धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो रे । बाल विवाहमा लगाइएको प्रतिबन्ध र शैक्षिक चेतनाको फलस्वरुप आज भोलि बिहेबारी बीस वर्ष पारी भन्छन् । मेरो विवाह पनि बीस वर्षको उमेरमा भयो । मेरो मागी विवाह हो । मलाई मेरै फुपु दिदीले माग्नु भएको हो । मेरो फुपु र केटाको मामाघर एकै ठाउँमा रहेछ । आफ्नै दिदी माग्न आएपछि बाले सजिलै मलाई दिनु भएको थियो ।
दिदीले गरेको कुरामा बालाई विश्वास नहुने कुरा भएन । विवाह अघि हामीले एक अर्कालाई देख्न पाएनौ । हाम्रा अविभाकहरुले त्यो आवश्यक ठान्नु भएन । म बाआमाको आँगनबाट अन्मिएर एक दिन पराइको घर गएँ ।
उमेरले पखेटा लगाउँदै गए पछि मेरो मनमा घर संसारका अनेकन रंगीन सपनाहरु थिए । सानो चिटिक्क परेको घर थियो । कमलको फूलजस्ता नानी र बाबु थिए । शितल छहारीजस्ता सासु आमा र ससुरा बा थिए । पैसाको कमी भए पनि मनको धनी मायालु जीवन साथी थिए । पराइ घरमा मेरा दिनहरु बित्न थाले । सुरु सुरुमा अग्घोर अतेर लागे पनि पछि पछि बानी पर्दै गयो ।
हामी छोरी मान्छेलाई सानैदेखि, “एक दिन तैँले यो घर छोडेर जानुपर्छ”, भनेर सम्झाइएको हुन्छ । मानसिक तयारी गराइएको हुन्छ । त्यसलाई वाध्यताको रुपमा स्वीकार्नु बाहेक अरु विकल्प सामान्यता हुँदैन ।
घर सजिलै थियो । छरछिमेकमा पनि मजस्तै मेरै उमेरका छोरी बुहारीहरु थिए । उनीहरुसँग मेलापात, घाँस दाउरा गर्दा रमाइलो हुन्थ्यो । हाँस खेल गरिन्थ्यो । वनपात जाँदा साथीहरु मिलेर सुख दुःखका, माया प्रीतिका गीत गाउँथ्यौँ । हामी बुहारीहरु त माइतीलाई सम्झेर पनि गीत गाउँथ्यौँ । सबैको भावना उस्तै हुन्थ्यो ।
उनको सानैदेखि रक्सी खाने बानी रहेछ । मैले कति सम्झाए र छुटाउने प्रयास गरेँ । म कति रुन्थेँ, रिसाउँथे, कहिले भोकै पनि सुत्थेँ उनको मन पग्लन्छ कि भनेर । तर, म सफल हुन सकिनँ । नानीदेखि लागेको बानी एक/दुई दिन छोडे पनि फेरि खाइहाल्थे । मेरो केही लागेन । मैले हार खाएँ र जेसुकै होस् भनेर कराउन छोडेँ । तैपनि जिन्दगी ठिकठिकै चलिरहेको थियो । मैले जिन्दगीसित सम्झौता गरेकी थिएँ । आफूले आफैँलाई चित्त बुझाएकी थिएँ ।
बिहे गरेको पाँच वर्षपछि हाम्री छोरी जन्मिन् । म आमा बनें । यतिन्जेल सन्तान नहुँदा कता–कता मलाई सियोले चस्स–चस्स घोचेजस्तो पनि हुन्थ्यो कहिलेकाँही । कतै सन्तान नहुने त हैनन् भनेर पीरजस्तो पनि लाग्थ्यो कहिले त । पतिका कारण सन्तान नभए पनि पत्नीलाई नै दोषी ठहर्‍याउँछ, हाम्रो समाज । मसँगै बिहे भएर आएका धेरैजसो दिदी बहिनी आमा बनिसकेका थिए ।
आमा हुनको खुसी र गौरव बोधले जस्तै प्रसव वेदना पनि सहन गर्ने शक्ति प्राप्त हुँदो रहेछ । यो मैले आफैँले अनुभव गरेँ । मैले प्राकृतिक रुपले नै छोरीलाई जन्म दिएँ । म सुत्केरी भएको केही दिन पछि, उनी बिरामी भए । उपचार गरे पछि केही ठीक हुन्थ्यो, फेरि उस्तै हुन्थ्यो । यो क्रम चली रह्यो ।
पछि स्थानीय अस्पतालकोे सिफारिसमा उनलाई काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा लगियो । ससुराबाले लिएर जानुभयो । शिक्षण र टेकु अस्पतालमा गरी दुई महिना उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर राखियो ।
निको भएर घर आएको केही समय पछि उनले भने, ‘मेरो कारणले घरमा ऋण लाग्यो । म अब पैसा कमाउन जान्छु । छोरीको पनि भविष्य हेर्न पर्‍यो ।’
मैले, नजानूस् यहीँ दुख गरेर बाख्रा पाठा पालेर, खेतीपाती गरेर भए पनि कमाउँला भनेँ । बुबा आमा पनि बृद्ध हुनहुन्छ । बालखा छोरी लिएर म कसरी बस्न सक्छु र ? भनेर धेरै सम्झाएँ । तर, उनले मेरा कुरा सुनेनन् । सासू ससूराले उनलाई टीका लगाएर छिटै आएस् भनेर आशिष दिँदै विदा दिनुभयो ।
उनी गएको केही हप्तापछि मलाई ससुराबाले भन्नु भयो, “बुहारी तिमी पनि एकफेर शिक्षण अस्पताल जाऊ । आफ्नो र नातिनीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आऊ ।”
हामी भालिपल्टै साइत गरेर गयौँ । शिक्षण अस्पताल गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरायौँ । दूर्भाग्य ! हामी आमा छोरी दुबैमा नै एचआइभी पोजिटिभ देखियो ।
मैले कथम् आफूलाई एचआइभी पोजिटिभ भएपनि छोरीलाई नहोस् भनेर कति पुकारेँ भगवानलाई ! तर, छोरीलाई पनि एचआइभी पोजिटिभ भएको सुने पछि मैले मानसिक सन्तुलन नै गुमाउन पुगेको थिएँ । मलाई मैले टेकेको जमिन नै भासिएको आभाष भएको थियो । मलाई आफ्नो भन्दा पनि छोरीको पीरले सतायो ।
मेरा सबै सपनाहरु काँचको सिसाजस्तै चकनाचुर भए । तर, छोरीका लागि भए पनि म बाँच्नु थियो । त्यो दिन सम्झँदा आज पनि मेरो मुटु भक्कानिएर आउँछ । उनी कमाउन भनेर हिँडेको पनि एक दशक बढी भैसकेको छ । यो अवधिमा न उनी आए, न उनको केही पत्तो खबर आयो । अब त उनी फर्केर आउलान् भन्ने आशा पनि लाग्न छोडिसकेको छ तर, आँखा साँझ परे पछि एक पटक तगेरा तिर नहेरी घरभित्र पस्न मान्दैनन् ।
उनी बिहे नहुँदै संक्रमित रहेछन् र सायद आफ्नो पोल खुल्ने डरले घरबाट भागेका रहेछन् । उनलाई मेरो र समाजको अगाडि मुख देखाउन पनि लाज लाग्यो होला । उनी सायद पश्चातापले पिल्सिएका थिए की !
एकातिर उनकै कारण एचआइभी संक्रमित जीवन बाँच्नुपरेको छ भने अर्काेतिर सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने बाचा तोडेर, मलाई एक्लै छोडेर हिँडिदिँदा मेरो जिन्दगी झनै दुरुह र कष्टकर भएको छ । दोहोरो धोका खानेमा परेकी छु म । एकल, त्यसमाथि एचआइभी संक्रमित महिलालाई समाजले कसरी हेरेको छ र कुन स्थानमा मलाई राखेको होला तपाईँहरु आफैँ सोच्न र अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । पहिलो जुनीमा मैले पाप गरेको भएर त्यो पापको सँजाय आज आएर भोग्दैछु । यस्तो पनि लाग्यो कति दिनसम्म त मलाई ।
मेरा छिमेकी र साथीसंगी आफन्तले एचआइभी पोजिटिभ हो भन्ने थाहा पाए पछि म र मेरी नानुलाई कति लाञ्छना लगाए र भेदभाव गरे । त्यो पीडाबाट आजसम्म पनि मुक्ति पाउन सकिएको छैन ।
अब त बानी पनि परिसक्यो । बिस्तारै समाजमा पनि परिवर्तन आएको छ । सचेतना बढेको छ, पहिलेको तुलनामा केही सहजता पनि महसुस भएको छ ।
मलाई अनन्तः दुख छ, तर कुनै अपराधबोध भने छैन । मेरा कारणले म संक्रमित भएको हैन । मैले छोरीलाई संक्रमित बनाएको पनि हैन । मलाई यत्ति थाहा छ, म छोरीका लागि पनि बाँच्नु पर्छ । छोरीका लागि मैले संसारका सबै खाले चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्छ । म त्यसका लागि सधैँ तयार रहनेछु । म बा, आमा, फुपु, सासु, ससुरा कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न । उहाँहरु सबैले मेरा भलो नै चाहेको हो ।
मेरी फूपू दिदी मलाई, “त्यो घरमा नबस । मेरो घरमा आऊ म तिमीलाई पाल्छु” ,भन्नुहुन्छ । उहाँलाई हुनसम्म पछुतो भएको छ । तर, जेजस्तो भए पनि म कर्म घर छोडेर कहाँ जान सक्छु र ? फेरि म एकलै पनि छैन । आमा बुआको लागि म गर्हुङ्गो बोझ भएकी छु । मैले कुनै दिन उहाँहरुलाई खुसी दिन सकिन ।
मैले एक दिन फोनमा कुरा गरिन भने आमा रुनुहुन्छ । म आमाको कोखीको स्थायी घाउ बनेकी छु । सायद विधताले नै मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको होला भनेर चित्त बुझाउँछु । अरु उपाय पनि के नै छ र ?
बरु मलाईजस्तो अरु कसैलाई नपरोस् भनेर एच आइ भीको सचेतना अभियानमा लाग्ने गरेकी छु । अझै पनि कुनै दिन उनी फर्केर टुप्लक्क घर आउँछन् कि जस्तो लाग्छ । जतिसुकै बैगुन भए पनि, माया त लाग्छ नि । तर, लागेर के गर्नु ?
कथा : गुरुको सम्मानसाहित्य/कला | 2078-Magh-15
पण्डितको विवशतासाहित्य/कला | 2078-Magh-15
कविता : जूनसाहित्य/कला | 2078-Magh-15
पाँच मुक्तकसाहित्य/कला | 2078-Magh-15
गजलसाहित्य/कला | 2078-Magh-15
लघुकथा : किसानसाहित्य/कला | 2078-Magh-08
स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ महिनाभित्र गर्न सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई सुझाव
११ वर्षपछि मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको जित, मरिसस १-० ले पराजित
४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध कपडासहित एक जना पक्राउ
आगामी बुद्ध जयन्ती अघि नै गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ : मन्त्री आले
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आइतबार बस्दै
गृहमन्त्री खाँणद्वारा २० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टेलिफोन संवाद, के विषयमा भयो कुरा ?
सत्ता गठबन्धन चुनावबाट भाग्न खोजेको छैन : माधव नेपाल
अमेरिकाले रुसको सुरक्षा चिन्ताको बेवास्ता गर्‍यो : पुटिन
samsun escortkonya escortmalatya escortmersin escortkocaeli escortkayseri escortizmir escortizmit escortistanbul escortantalya escortdiyarbakir escortdenizli escortgaziantep escortankara escortsivas escortyalova escortadana escortduzce escortbatman escortkarabuk escortaksaray escortvan escortdiyarbakir escorttrabzon escorturfa escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortnevsehir escortmugla escortnigde escortmardin escortmaras escortmanisa escortmalatya escortkutahya escortkayseri escortkonya escortkocaeli escortcorum escorteskisehir escorthatay escortantep escortisparta escorterzurum escortdenizli escortcanakkale escortedirne escortbursa escortbalikesir escortaydin escortantalya escortafyon escortadana escortçerkezköy escortçorlu escortsivas escortmanisa escortizmir escortadana escortaydin escortankara escortantep escortbursa escorteskisehir escortkayseri escortdenizli escortdiyarbakir escortkocaeli escortmalatya escortkonya escortmaras escortmardin escortmersin escorthatay escorturfa escortbalikesir escorterzurum escorttrabzon escortsamsun escorttekirdag escortsakarya escortmugla escortordu escort